Thursday June 08, 2017 - 12:23:19 in Wararka by Super Admin
Wasiirka arrimaha dibadda Aala Sacuud ayaa sheegay in go'doominta saaran Qadar ay sii socan doonto inta ay uga hoggaansameyso dalabaadka dowladaha Khaliijka ee ah joojinta taageerada ay siiso Ururada Xamaas iyo Ikhwaanul Islaam islamarkaana ay xirto Telefeshinka Afka dheer ee Aljazeera.
Dhammaan duulimaadyadoo shirkadda Qatar Airways ay ku tagi jirtay dowladaha Sacuudiga, Baxreyn,Urdun Masar iyo Moritaaniya ayaa la joojiyay sidoo kale shirkadaha ganacsiga ee wadamadaasi ayaa jaray cilaaqaadkii ay Qadar lalahaayeen.
Dowladda Turkiga oo isgarab taagaysa Xukuumadda Qadar.
Baarlamaanka Dowladda Turkiga ayaa maalintii Arbacada ee shalay waxay si buuxda isugu raaceen in Ciidamo dheeraad ah loo diro Saldhigga uu Turkigu ku leeyahay dalka Turkiga kadib markii Afar dowladood oo Carab ah ayaa maalmo ka hor cunaqabeenno kusoo rogeen Dowladda Qadar.
Tallaabtani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dowladaha Khaliijka ee Sacuudiga uu hogaaminayo laga yaabo inay faragelin Meliteri ku sameeyaan Dowladda Qadar, si ay awood Meliteri ugu badalaan Maamulka dalkaasi ka jira.
Dowladaha Turkiga iyo Qadar ayaa sannadkii 2015-kii gaaray heshiisyo kala duwan oo ay ugu weyn tahay in Turkigu uu Saldhig Meliteri ka sameysto dalka Qadar, islamarkaana uu halkaas geeyo Boqollaal Ciidamo ah, waxaana heshiiskaas qeyb ka ah in Dowladda Turkigu ay difaacdo haddii weerar lagu soo qaado Dowladda Qadar.
Go;aankan uu isku raacay Baarlamaanka Dalka Turkiga ayaa waxa uu yimid kadib baaq deg deg ah oo ka yimid Xukuumadda dalkaasi, taas oo Baarlamaanka ka dalbatay inuu si deg deg ah u meel mariyo qorshahaasi, si loola jaanqaado xiisadaha sii kululaanaya ee u dhaxeeya Dowladda Qadar iyo qaar ka tirsan Dowladaha Khaliijka.
Sidoo kale tallaabtani waxay u muuqataa mid uu Turkigu doonayo inuu ku muujiyo taageerada uu ku hayo Dowladda Qadar, kadib markii dhawaan ay xiriirkii u jareen dowladaha Sucuudiga, Imaaraatka, Baxreyn iyo Masar, iyagoona ku eedeeyay in Xukuumadda Dowxa ay maal geliso waxa ay ugu yeereen Argagixisada.
Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Dayib Ordagan ayaa diiday cunaqabteennada lagu soo rogay dalka Qadar, isagoona ballan qaaday in Wadankiisa uu sii kordhin doono xiriirka iyo wada shaqeynta uu la leeyahay dalkaasi.